Tag: Vidio Ahịa | Martech Zone
Tag: Ahịa vidiyo
Naanị anyị kesara ihe ọmụma gbasara mkpa ahịa ahịa - na nke ahụ, n'ezie, gụnyere vidiyo. Anyị na-eme ọtụtụ vidiyo maka ndị ahịa anyị n'oge na-adịbeghị anya ma ọ na-abawanye ma njikọ aka ma ọnụego ntụgharị. E nwere ọtụtụ ụdị nke e dekọrọ, mepụtara vidiyo ị nwere ike ime… ma echefukwala ezigbo oge vidiyo na Facebook, vidiyo mmekọrịta na Instagram na Snapchat, na ajụjụ ọnụ Skype. Ndị mmadụ na-ewe ọtụtụ vidiyo. Ihe Mere O Ji Dị Gị Mkpa
Sọnde, Febụwarị 23, 2020 Saturday, January 23, 2021 Douglas Karr
Anyị na-ebupụta usoro ajụjụ ọnụ ọhụụ ga - emechi ebe a n’oge na - adịghị anya na teknụzụ azụmaahịa site n’enyemaka nke Creative Zombie Studios. Podcast dị anyị na Edge nke Web Radio bụ ihe ịtụnanya na ikuku dị na Indianapolis na Satọdee n'ehihie Satọdee na Nnwere Onwe 95… mana oge ụfọdụ, anyị kwesịrị igwupụta nke ọma na talent anyị chọrọ ịjụ ajụjụ ọnụ. Site na egwu egwu sitere na otu ndị enyi, Brad na ndị otu ya jikọtara nnukwu ntinye okwu
Sọnde, Febụwarị 9, 2020 Sọnde, Febụwarị 9, 2020 Halley Johnson
Tọzdee, Disemba 3, 2019 Tọzdee, Disemba 3, 2019 Douglas Karr
Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ SaaS ruo ogologo oge, m na-anọgide na-asụ ude ka m na-ebudata ma na-agụ ọmụmụ ihe. Ekwela ka m mehie, m n'ezie na-arụ ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe anyị chọpụtara a ahịa na-eme ihe ịtụnanya na anyị n'elu ikpo okwu ma ọ bụ ndị na-enweta ịrịba pụta results na anyị na-kewapụrụ na-akwalite a ikpe ọmụmụ banyere ha. Ahịa abụghị naanị inweta, ọ bụ ezie. Ire ahia bu imata atumatu di uku, wee nye ha nyocha ha kwesiri